Sarkaal ka tirsan Milateriga Soomaaliya oo ku dhintay Shil ka dhacay inta u dhaxaysa Jowhar iyo Buurane. – Dheeman Media Network
Wararka galabnimadan naga soo gaaraya Deegaan udhaw Garoonka Diyaaradaha Jowhar ayaa sheegaya in galabta uu halkaasi ku dhintay Sargaal Caan ka ahaa Gobolka Shabeellaha Dhexe oo katirsanaa Meliteriga Soomaaliya.
Sargaalkani waxa lagu magacaabi jiray Mukhtaar Jareere waxaana uu ahaa Taliyaha Ciidamada Xoogga Dalka Ee ku sugan Aagga Deegaanka Buurane oo u dhexeeya Degmooyinka Jowhar iyo Mahadaay ee Gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wararka ayaa sheegaya inuu Cabdi bile ah si xawaare ah u waday taasi oo sababtay inuu rogmado Gaarigu islamarkaana uu ku dhintay sarkaalkan lagu magacaabi jiray Mukhtaar Jareere iyadoo Afar kamid ahaa Ilaaladiisana ay ku dhaawacmeen shilka.
Marxuumka dhintay ayaa waxa uu ka baxay magaalada Jowhar Casirnimadii galabta isagoo kusii jeeday sida la sheegay Deegaanka Buurane, wararka ayaa sheegaya inuu marxuumku Bilo ka hor ku dhaawacmay weerar ay Al Shabaab ku dili rabeen oo ka dhacay wadada udhaxeysa Jowhar iyo Balcad Askar badan oo la socotayna lagu dilay.
Mukhtaar Jareere ayaa dadka yaqaanay waxay sheegaan inuu ahaa nin ad adag oo Shaqadiisa ku fiicanaa askartana canaan iyo cunto iskugu dari jiray kana warqabi jiray.
Warar kale ayaa sheegaya in Marxuumkani uu mudooyinkii dambe la kulmayey Hanjabaadyo cul culus oo Al Shabaab usoo diri jireen balse taasi aysan saamayn jirin shaqadiisa.
Meydka Sargaalkani waxa loo soo qaaday Jowhar oo Caawa uu ku baryi doono berrina la qorsheenayo in la xabaalo halkaasi, marxuumku Caruur iyo Xaas ayuu ka tegay kuwaa Magaalada Jowhar deggan.